पुरुषले भने, ‘न!ग्न तस्बिरको चार हजार रुपैयाँ दिन्छु’ महिलाले जे पठाइन् त्यो हेर्न लायक
‘शो बु!ब्स । सेन्ड न्यू!!ड्स । गिभ से&क्स ।’
यी केही मेसेज हुन् जो धेरैजसो महिलाको सोसल मिडिया इन्बक्समा भेटिन्छ । यो कति अचम्मको छ नि । एकपटक सोच्नुहोस् त तपाईंले वास्तवमा नै कसैलाई भेट्नुहुन्छ, हालखबर नसोधिकनै आफ्नो न!ग्न तस्बिर देखाउ भन्दा कस्तो हुन्छ । मानिसहरु आमनेसामने हुँदा सायद यस्तो कसैमाथि पनि भएको छैन होला । तर मानिसहरुले सोसल मिडियामा त सबै चल्छ भनेर सोचेका छन् ।
Weirdos continued: Somebody messaged me asking if I wanted money but I needed to send him ‘pics’ in return (nudes obviously) he sent me £30 on PayPal and I sent himavideo of me driving and MC’ing an Oakzy B song then boughtabig scran with the £30 ??‍♀️ pic.twitter.com/2LntXqXOh1
लामो समयदेखि एक व्यक्ति उनीसँग कुरा गर्न खोजिरहेका थिए । महिलाले उनीसँग कुरा गरिन् । कुरा सुरु भएको केही क्षणमा नै ती व्यक्तिको उद्देश्य के थियो त्यो स्पष्ट भयो । निकै कम समयमा उनले ती महिलासँग अचम्मको माग राखे । तस्बिर (पक्कै पनि न!ग्न) पठाउने माग । साथै उनले एउटा प्रस्ताव पनि राखे । तस्बिर पठाए बापत् उनी महिलालाई ३० पाउन्ड दिन तयार थिए । नेपाली रुपैयाँ चार हजार बढी ।